KiKi Challenge မှာ ပါဝင်အစွမ်းပြကပြလိုက်တဲ့ နိုင်းနိုင်းရဲ့ ဇနီး စန္ဒီချို
31 Jul 2018 . 4:47 PM
အဆိုတော် Drake ရဲ့ ‘In my feelings’ ဆိုတဲ့ သီချင်းမှာ ပါတဲ့ သီချင်းတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ KiKi Challenge ဆိုပြီး ကပြတာ ခေတ်စားနေပါတယ်။ KiKi Challenge ကို ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ကြပြီး တွေ့ရများတာကတော့ ကားပေါ်ကနေ လမ်းဆင်းလျှောက်ပြီး ကားနဲ့ အပြိုင် လမ်းလျှောက်ပြီး ကပြကြတာပါ။
နိုင်ငံတကာမှာ ခေတ်စားသလိုပဲ ဒီမှာလည်း ဝါဆိုမိုးဦး၊ နေခြည်ဦး ၊ သုသု၊ အုပ်စိုးခန့်၊ သွန်းဆက်နဲ့ ဟိဏ်းသစ်တို့လို နာမည်ကျော်တွေကအစ KiKi Challenge လိုက်ကပြီး ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတွေ တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလည်း နိုင်းနိုင်းရဲ့ ဇနီး စန္ဒီချိုက KiKi Challenge ကို အမိုက်ဆုံးပါဝင်ကပြလိုက်ပါပြီ။ ဗီဒီယိုကိုတော့ ဒီလင့်မှာ ကြည့်ပါ။
ဗီဒီယိုကိုတော့ “Yes, I had to… so, please do not press play if you’re tired of this song and danc. Sorry par” ဆိုပြီး Caption ရေးထားကာ ကတာကလည်း တကယ့်ကို အမိုက်စားသွက်သွက်လက်လက် ကပြသွားတာမို့လို့ တချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Photo Credit : စန္ဒီချို Facebook
KiKi Challenge မှာ ပါဝငျအစှမျးပွကပွလိုကျတဲ့ နိုငျးနိုငျးရဲ့ ဇနီး စန်ဒီခြို
အဆိုတျော Drake ရဲ့ ‘In my feelings’ ဆိုတဲ့ သီခငျြးမှာ ပါတဲ့ သီခငျြးတဈပိုငျးတဈစနဲ့ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာ KiKi Challenge ဆိုပွီး ကပွတာ ခတျေစားနပေါတယျ။ KiKi Challenge ကို ပုံစံမြိုးစုံလုပျကွပွီး တှရေ့မြားတာကတော့ ကားပျေါကနေ လမျးဆငျးလြှောကျပွီး ကားနဲ့ အပွိုငျ လမျးလြှောကျပွီး ကပွကွတာပါ။
နိုငျငံတကာမှာ ခတျေစားသလိုပဲ ဒီမှာလညျး ဝါဆိုမိုးဦး၊ နခွေညျဦး ၊ သုသု၊ အုပျစိုးခနျ့၊ သှနျးဆကျနဲ့ ဟိဏျးသဈတို့လို နာမညျကြျောတှကေအစ KiKi Challenge လိုကျကပွီး ဗီဒီယိုအပိုငျးလေးတှေ တငျခဲ့ကွပါတယျ။ အခုလညျး နိုငျးနိုငျးရဲ့ ဇနီး စန်ဒီခြိုက KiKi Challenge ကို အမိုကျဆုံးပါဝငျကပွလိုကျပါပွီ။ ဗီဒီယိုကိုတော့ ဒီလငျ့မှာ ကွညျ့ပါ။
ဗီဒီယိုကိုတော့ “Yes, I had to… so, please do not press play if you’re tired of this song and danc. Sorry par” ဆိုပွီး Caption ရေးထားကာ ကတာကလညျး တကယျ့ကို အမိုကျစားသှကျသှကျလကျလကျ ကပွသှားတာမို့လို့ တခကျြလောကျကွညျ့လိုကျပါဦး။
Photo Credit : စန်ဒီခြို Facebook